Fred Tatasciore – Cast – Burmese Subtitle
IMDB: 6.1/10 92,948 votes
Rogue One: A Star Wars Story (2016) Rogue One: A Star Wars Story (2016) A rogue band of resistance fighters unite foramission to steal the Death Star plans and bringanew hope to the galaxy. File Size – 2.13 GB Quality- Blu Ray 1080p 6CH Running Time – 2hr 13min Format – mkv Genre – Action, Adventure, Fantasy Subtitle – Myanmar (Hard Sub) Translator – Aung Myint Oo Encoded By – K#/4nt_M1nn_K0
IMDB: 7.8/10 452,005 votes
Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) စတားဝေါရျဈ ၁၁ ကားမွောကျ ရုပျရှငျဖွဈတဲ့ the rise of Skywalker လာပါပွီ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ကွယျစငျစုကွီးတှဆေီမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာ ပြောကျကှယျနတေဲ့ အငျပါယာပါပတငျးရဲ့ အသံကို ပွနျကွားလာရပါတယျ။ ကွယျစငျစုတှအေားလုံးကို သိမျးပိုကျပွီး လကျစားခမြေယျလို့ ကွညောလိုကျသံကွီးပါပဲ။ (မကွညောဘဲ အလဈဝငျတိုကျရငျ သခြောပေါကျနိုငျမှာပမေယျ့ ဘာလို့ ကွညောလဲတော့ မသိပါဘူး) ဒါကွောငျ့ ဗိုလျခြုပျလယောဟာ ဒီကိစ်စကို လိုကျစုံစမျးဖို့ အထူးတပျသားတှကေို စလှေတျလိုကျပါတော့တယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ရေး ကတော့ ဂဒြိုငျးတဈယောကျဖွဈလာဖို့ လကေ့ငျြ့နဆေဲပါပဲ။ ဖကျဈအျောဒါရဲ့ ခေါငျးဆောငျကွီးဖွဈလာတဲ့ ကိုငျလိုရမျကတော့ အငျပါယာ ပါပတငျးကိုသတျပွီး အာဏာကို အခိုငျအမာ ရယူဖို့ လိုကျရှာပါတော့တယျ။ Review Credit
IMDB: 6.8/10 269,251 votes
Star Wars: The Force Awakens (2015) Star Wars: The Force Awakens (2015) Thirty years after defeating the Galactic Empire, Han Solo and his allies faceanew threat from the evil Kylo Ren and his army of Stormtroopers. File Size – 2.19 GB Quality- Blu Ray 1080p 6CH Running Time – 2hr 18min Format – mkv Genre – Action, Adventure, Fantasy Subtitle – Myanmar (Hard Sub) Translator – Zaw Myint Encoded By – K#/4nt_M1nn_K0
IMDB: 8.0/10 761,563 votes
Frozen II (2019) Frozen II (2019) ဇတျလမျးအညှနျးကတော့…. အယျလျဆာနဲ့ အနျနာတို့ ညီအဈမ ဟာ အယျရနျဒဲတိုငျးပွညျမှာ ပြျောပြျောရှငျရှငျ အတူနထေိုငျကွပမေယျ့ ကံဆိုးတဲ့တဈနေ့ ကိုရောကျလာပါတော့တယျ။ အယျလျဆာရဲ့ မိဘတှတေုနျးက ရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ မှျောဝငျတောအုပျထဲက ဝိညာဉျတှေ၊ အယျလျဆာပဲ ကွားနရေတဲ့ ချေါသံတှနေဲ့အတူ သူတို့တိုငျးပွညျ အန်တရာယျကရြောကျလာခြိနျမှာ အနျနာတို့လညျး ခရစ်စတော့ဖျ၊အိုလကျဖျ၊ ဆဗနျတို့နဲ့အတူ အတိတျက အမှနျတရားကို ရှာဖှရေပါတော့တယျ။ Review Credit to CM
IMDB: 7.0/10 78,903 votes
Star Trek Into Darkness (2013) တဈကယျတော့ ဒီဇာတျကားဟာ တဈကယျကို ကောငျးမှနျတဲ့ Star Trek ဇာတျကားကောငျးတဈကားအဖွဈ ယခုဆို ရပျတညျနိုငျခဲ့ပွီလေ။ တဈကားလုံးကို ခွုံပွောရမယျဆိုရငျ Actions တှေ၊ Actions တှေ အရမျးမြားလှနျးတယျ။ တဈကားလုံးကို ဇာတျလမျးထကျ Actions တှကေ မြားလှနျးတော့ တဈခါတဈခါ အာရုံကိုမနညျးပွနျဖမျးရတယျ။ သို့ သျော Star Trek ရဲ့ ပုံပနျးထဲကတော့ ထှကျမသှားခဲ့ပါဘူး။ Star Trek ရဲ့ ဇာတျကားတဈကားဆိုတဲ့အတိုငျး Star Trek ခံစားခကျြကိုတော့ ရနပေါသေးတယျ။ ဒါဟာ Justin Lin ကို ခြီးကြူးရမှာ ဖွဈတယျ။ သူ ကြှမျးကငျြတဲ့ Action ခနျးတှကေို ပရိသတျသဘောကအြောငျ ထညျ့နိုငျခဲ့သလို Star Trek theme ထဲကနလေညျး ထှကျမသှားစရေအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တာပဲ။ Justin Lin ကို သရုပျဆောငျတှရေဲ့ ပွောခကျြအရဆိုရငျ ...
IMDB: 7.7/10 453,176 votes
Madagascar: Escape2Africa (2008) [Zawgyi] ဒီတစ်ခါတော့ 2005 ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ Madagascar ဆိုတဲ့ အမေရိကန် ကာတွန်းကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Adventure comedy အမျိုးအစား ကာတွန်းကားလေးပါ မာတီဆိုတဲ့ မြင်းကျားလေးရယ်အဲလက်စ်ဆိုတဲ့ ခြင်္သေ့ရယ် မယ်လ်မန်းဆိုတဲ့ သစ်ကုလားအုတ်ရယ် ဂလော်ရီရာဆိုတဲ့ ရေမြင်းမလေးရယ် သူတို့ ၄ ကောင်က အဓိက ဇာတ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ် သူတို့ လေးကောင်ဟာ နယူးယော့ခ်တိရစ္ဆာန်ရုံက တိရစ္ဆာန်လေးတွေပါ တိရစ္ဆာန်ရုံထဲမှာပဲ သူတို့ ဘဝကို နှစ်မြှုပ်ထားရင်း သာယာပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း ၄ ယောက်ပေါ့ တစ်နေ့မှာ တိရစ္ဆာန်ရုံက ပင်ဂွင်း ၄ ကောင်က အန္တာတိကတိုက်ကို ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားနေကြတာကို မြင်းကျားလေးမာတီ တွေ့လိုက်ရာကငါတို့လည်း အရိုင်းတောထဲမှာ တောရိုင်းသတ္တဝါတွေနဲ့ သွားနေရင် ပျော်စရာကောင်းမယ်လို့ သူအတွေးရသွားပါတော့တယ် သူ့မွေးနေ့မှာ ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်က မွေးနေ့လုပ်ပေးပြီး လက်ဆောင်တွေ ပေးကြပေမဲ့ သူမပျော်တော့ပါဘူး အကျိုးအကြောင်းမေးမှ သူရှင်းပြလိုက်တော့ အကုန် အံ့သြပြီး မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်း ...
IMDB: 6.6/10 188,324 votes
Resident Evil: Vendetta (2017) ဒီကားလေးကတော့ Vendetta ဆိုတဲ့အတိုင်း Actor လေးယောက်ရဲ့ အငြိုးတွေ လက်စားခြေမှုတွေနဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော်တော်လေးတော့ Actionဆန်ပြီးကြည့်လို့ကောင်းမှာသေချာတယ်ဗျ … Actor တွေကတော့ Leon S Kennedy , Chris Redfield , Rebecca Chambers နဲ့ Villanကတော့ Glan Arias တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် … ဇာတ်လမ်းပုံစလေးကတော့ – အစိုးရက ဗီလိန် Arias ကို သတ်ဖို့ လေယာဉ်နဲ့ဗုန်းကြဲခိုင်းခဲ့တယ် … ဖြစ်ချင်တော့ Arias ကသူရဲ့မင်္ဂလာပွဲဆောင်နေဖြစ်နေတော့ သူ့ဇနီးရောမိတ်ဆွေတွေပါ သေသွားခဲ့တယ် … သူချစ်ရတဲ့သူတွေသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက် အစိုးရကိုပြန်လက်စားချေဖို့ Virus တွေဖန်တီးပြီးပြန်လက်စားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် … Leon ကတော့ သစ္စာဖောက်ခံခဲ့ရပြီး သူလူတွေ Bioweapons တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲခံခဲ့ရတယ် … Chris Redfield က (BSAA) Bioweapon Security Assessment Authority ကပါ … BSSA ...
IMDB: 6.3/10 8,564 votes
Wreck-It Ralph (2012) Ralph ဟာ သူ့ဂိမ်းထဲ က ပြီးပြည့်​စုံပြီး ​တော်​​နေတဲ့ ​ကောင်​လိုမျိုး အချစ်​ခံချင်​သူပါ ပြသနာက လူဆိုး​​တွေကို ဘယ်​သူမှမချစ်​​ကြတာပါပဲ ဒါ​ပေမဲ့ သူရဲ​ကောင်း​တွေကို​တော့ ချစ်​ကြပါတယ်​ ဒီ​တော့ ဆားဂျင့်​အဖြစ်​​ဆော့ရတဲ့ ဂိမ်း​ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ​တော့ အဲ ဂိမ်းကို သူ့အတွက်​ သူရဲ​ကောင်းဖြစ်​ဖို့ အခွင့်​အ​ရေးလို့ မြင်​သွားပါတယ်​ သူဟာ ဂိမ်းထဲ ကို ရိုးရှင်းတဲ့ပလန်​နဲ့ ဝင်​သွားတယ် ​ နိုင်​ခဲ့​ပေမယ့်​ မကြာခင်​မှာပဲ အရာအားလုံးပျက်​စီးသွားခဲ့ပါတယ်​ ဒီအခါမှာ သူဘာ​တွေဆက်​လုပ်​မလဲ ဘာ​တွေ ဆက်​ဖြစ်​လာမလဲ သူဖြစ်​ချင်​တဲ့ သူရဲ​ကောင်း​ရော ဖြစ်​လာပါ့မလားဆိုတာ​တော့ Wreck-It Ralph ဆိုတဲ့ ၂၀၁၂ ထွက်​ Animation ကား​လေးထဲမှာ ဆက်​လက်​ကြည့်​ရှုကြပါ IMDb rating 7.7 ထိရထားတဲ့ ကာတွန်း​လေးမို့ လက်​မလွတ်​သင့်​တဲ့ ဇာတ်​ကား​လေးပါ. Review Credit to Original Translator - Aung Min Khant Encoder - Robinn Hood
IMDB: 7.7/10 336,551 votes
9 (2009) Rating ပိုင်းမှာ 7.1 အထိရရှိခဲ့ပြီး ပရိတ်သတ်တွေရင်ထဲကို ရောက်သွားစေခဲ့တဲ့ Animation ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ... BS ကပရိတ်သတ်တစ်ယောက် တောင်းဆိုမှုကြောင့် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်... 9.9.2009 ခုနှစ်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကားလေးမလို့9လို့အမည်ပေးလိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်... စက်မှုမြို့တော်ကြီးဖြစ်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း နည်းပညာလုပ်ငန်း သိပ္ပံလုပ်ငန်းတွေထွန်းကားလာချိန်မှာ. လူတွေဟာ ..မိမိကိုယ်ကျိုးကိုယ်သာ ကြည့်ပြီး လောဘစိတ်တွေဖုံးလွမ်းလာကြပါတယ်... လူသားတွေကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ စက်ရုပ်တွေက လူသားတွေကို ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ လူသားတွေရဲ့ နောက်ဆုံးမျှေ်ာလင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ၀ိဥာဉ်အစားထိုးထားတဲ့ အရုပ်ကလေး ၉ ရုပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်... အဲ့ဒီအထဲမှာမှ ၉ ဆိုတဲ့အရုပ်ကလေးရဲ့ ပေါ့ဆမှုလို့ပြောရမလား ကံတရားလို့ပြောရမလား.....ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါဦး Translator -- Jerry Naing Encoder --K#/4nt_M1nn_K0
IMDB: 7.1/10 124,352 votes
Kung Fu Panda3(2016) Storyline Dragon Warrior ကြီး Po ဟာ သူ့အဖေနဲ့ ပြန်တွေ့ခဲပြီး Panda တွေနေတဲ့ လျှို့ဝှက်ရွာလေးဆီကို ရောက်သွားပါတယ်။ အဲအချိန်မှာဘဲ ကြမ်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ Kai ဆိုတဲ့သူ သေရွာကပြန်လာပြီး တရုတ်ပြည်မှာ ရှိသမျှ Kung Fu Master တွေကို လိုက်ရှင်းနေလေတော့ သူနဲ့သူ့ရွာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Po ဟာ သူ့ရွာက မလုပ်တတ်မကိုင်တတ် Panda တွေကို သိုင်းသင်ပေးဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ … Review Kung Fu Panda3ဟာ ဇာတ်လမ်းမရှိပါဘူး။ အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ နှစ်ကြောင်း သို့မဟုတ် Trailer ကြည့်လိုက်ရင် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးပြီးသွားပါလိမ့်မယ်။ Visual ပိုင်းမှာ Kung Fu Panda3ဟာ တော်တော်လေးကိုတိုးတက်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စစချင်း ၁၀ မိနစ်လောက်ပေါ့။ 3D တွေဆိုတာ ရုပ်ရှင်ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် မမူးတဲ့ကျော်တောင် မူးချင်သလိုဖြစ်လာတဲ့အထိကို ...
IMDB: 7.1/10 111,535 votes
Kung Fu Panda2(2011) Kung Fu Panda2မှာတော့ ‘ပို’ ရဲ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို ကြည့်ရှုရမှာပါ…. ‘ပို’ ရဲ့အဖေဖြစ်သူဟာ မွေးစားအဖေဖြစ်နေပါတယ်… ‘ပို’ လသားအရွယ်မှာ သူတို့ရဲ့ရွာလေးကို တပ်ဖွဲ့တစ်ခုက ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖျက်စီးတာကို ခံလိုက်ရပါတယ်… ပို ရဲ့မိဘတွေဟာ ထွက်ပြေးရင်းနဲ့ ပို့ ကို စွန့်ပစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်… ဒါက ပို ရဲ့ ဘသ ဇာတ်ကြောင်းပါ… အခုချိန်မှာတော့ ဒေါင်းမင်းသားတစ်ယောက်ဟာ လက်နက်ဆန်းတစ်ခုကို တီထွင်ပြီးတော့ တရုတ်ပြည်ကြီးကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြံစည်နေပါပြီ… ဒါကို ပို နဲ့ သူ့အဖွဲ့က တားဆီးဖို့အတွက် တာဝန်ကျလာပါပြီ… ဒီတော့ ပို တို့တွေ ဒေါင်းမင်းသားကို ဘယ်လိုတားဆီးကြမှာလဲ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြဦးမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါဦး ဒီဇာတ်ကားဟာလည်း ပထမကားလိုပဲ rating ကောင်းကောင်းရထားတဲ့ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် အညွှန်းကိုတော့ Channel Myanmar မှကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ File Size – 1.42 GB Quality- Blu Ray 1080p 6CH Running Time – 1hr 30min Format – mkv Genre – Action, Adventure, Animation Subtitle – ...
IMDB: 7.2/10 222,395 votes
Power Rangers (2017) Mighty Morphin Power Rangers 2017 Reboot Movie နာမည်ကြားရုံနဲ့ ခင်ဗျားတို့တွေကြက်သီးတဖျန်းဖျန်းထရုံမကပဲ အသားတွေပါတဆတ်ဆတ်တုန်သွားမယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီးအာမခံပါတယ်…. တကယ်တော့ဒီရုပ်ရှင်ကို အညွှန်းတောင်တကူးတကရေးပြီးတော့ ညွှန်းနေစရာမလိုလောက်ပါဘူး… ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အပြင် ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတကွကြီးပြင်းလာတဲ့ ငယ်ဘ၀ဇာတ်ကောင်လူစွမ်းကောင်းများဖြစ်တဲ့ Power Rangers တွေဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးလည်း ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်….. ဒါပေမယ့် တစ်ခုပြောစရာရှိတာက ဒီရုပ်ရှင်ထဲကအဓိကဇာတ်ကောင်တွေ Power Rangers တွေဖြစ်လာမယ့် Angel Groove မြို့ရဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Power Rangers တွေဖြစ်လာကြမယ့် အထက်တန်းကျောင်းသားလေးတွေဖြစ်တဲ့ Jason,Kimberley,Billy,Zack,Trini တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့အတိုင်း လူတော်လူကောင်း အများအကျိုးသယ်ပိုးကြတဲ့ လူငယ်လေးတွေမဟုတ်ကြဘဲ ကျောင်းရဲ့ လူပေလူတေလေးများဖြစ်နေတာကို အံ့အားသင့်ဖွယ် မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…. ဒါ့အပြင် ဒီရုပ်ရှင်ဟာလှည့်ကွက် မြှပ်ကွက်များစွာနဲ့ တင်ဆက်ထားတဲ့အပြင်ကို ဇာတ်လမ်းအစမှာကိုပဲ ကြည့်ရှု့သူပရိတ်သတ်တွေအားလုံးကို ”ဟာ ဒါကဒီလိုပါလား” ဆိုပြီး အံ့အားသင့်ရေရွတ်ရလောက်အောင်ကို တင်ဆက်ထားတာကိုလည်း ကြည့်ရှု့ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်…. ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုတော့ အခုပြောပြတာထက် ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်ရှု့လိုက်တာက ပိုပြီးတော့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှု့တွေပေးစွမ်းနိုင်မှာမို့ အခုပဲ ဒေါင်းကြည့်ကြဖို့အတွက် တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်… နောက်ပြီး Original Power Rangers ရဲ့ Theme Song ကိုထပ်မံမွန်းမံထားပြီးတော့ နောက်အသစ်ထည့်ထားတဲ့ နောက်ခံတီးလုံးတွေက ဇာတ်ကိုလုံးဝအထွတ်ထိပ်ရောက်စေပြီး ကောင်းမွန်လှပစေခဲ့ပါတယ်… ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီရုပ်ရှင်မထွက်လာခင်ကတည်းက Ranger တွေရဲ့ Suit တွေ Morpher တွေ Zord တွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ပျက်ခဲ့ရတာတွေက ဒီရုပ်ရှင်ကိုတကယ်တမ်းကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ အကုန်ပျောက်သွားမယ်ဆိုတာ လုံးဝအာမခံပါတယ်…. နောက်ပြီးတော့ Mid-Credits Scene ကိုလည်း ...
IMDB: 6.0/10 88,153 votes
Incredibles2(2018) ပါးမိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ဘော့ဘ်၊ ဟယ်လန်၊ ဒက်ရှ်၊ ဗိုင်အိုလက်နဲ့ ဂျက်ဂျက်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ စူပါဟီးရိုးဝိသေသ The Incredibles အဖြစ်နဲ့ ဆက်ပြီးရှိ နေခဲ့ပါတယ်။ မက်ထရီဗစ်လီ ဘဏ်ဓားပြတိုက်မှုကို မကာကွယ်နိုင်တဲ့နောက်မှာတော့ အာဏာ ပိုင်တွေဟာ စူပါဟီးရိုးတွေအပေါ် ယုံကြည်မှုတွေ နည်းပါးလာတာ မို့ ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ စူပါဟီး ရိုးတွေဟာ မထင်မရှားနေခဲ့ရပါ တယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ ဘော့ဘ်၊ ဟယ်လန်နဲ့ သူတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေ လူစီရက်စ်ဘက်စ် (စူပါဟီးရိုး Forzone) ဆီကို စူပါဟီးရိုးတွေ ကို သဘောကျတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်၊ DEVTECH ပိုင်ရှင် ဝင်စတန်ဒီဗာက ဆက်သွယ်လာ ခဲ့ပါတယ်။ စူပါတွေ လူထုရဲ့ အားပေးမှုပြန်ရအောင်လို့ စတန့် အစီအစဉ်တွေပါဝင်ဖို့ ကမ်းလှမ်း တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဟယ်လန်ဟာ Elastigirl ဆိုတဲ့ စူပါဟီးရိုးနာမည် ဟောင်းနဲ့ပဲ ပါဝင်ဖို့ လက်ခံခဲ့ပါ ...
The Angry Birds Movie (2016) ကမ္ဘာကျော်ဂိမ်းကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်ပြီး အသက်သွင်းတဲ့ The Angry Birds Movie ဖြစ်ပါတယ် .. Animation ပရိတ်သတ်တို့ မျှော်လင့်ခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး .. ဇာတ်လမ်းအရဆိုရင် Angry Bird တွေ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို အစပျိုး မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ် ဂိမ်းထဲမှာ ဘာကြောင့် ဝက်တွေနဲ့ ရန်ဖြစ်ရလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို သိရမှာပါ .. ဂိမ်းထဲက အတိုင်း ငှက်တစ်ကောင်စီရဲ့ စွမ်းရည်တစ်မျိုးစီကိုလည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကြည့်ရှူခံစားရပါမယ်.. ဇာတ်လမ်းကြီးကြီးမားမားမရှိပေမယ့် တင်ဆက်ပြသပုံ မဆိုးတဲ့အတွက် ကြည့်ရှုမယ့် ပရိတ်သတ်တွေ သဘောကျ စိတ်ကျေနပ်စေမှာပါ … ရုပ်ရှင်ကပေးတဲ့ message တွေကလည်း ကောင်းမွန်တဲ့အတွက် ကြည့်ရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ် .. အထူးသဖြင့် ဇာတ်ကောင်လေးတွေကို မိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ သဘောကျစရာလေးတွေပါဝင်ပြီး ချစ်စရာပုံစံလေးတွေလည်း အများကြီးတွေ့ရပါဦးမယ် ခင်ဗျ .. ပြောရရင် animation cartoon ချစ်သူတို့ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါကြောင်း။ အားပေးကြည့်ရှုခံစားကြပါဦး (ဩော် မေ့တော့မလို့ စာတန်းထိုးပြီးတဲ့အထိကြည့်ကြပါလို့ ) review ကတော့ channelmyanmar မှကူးယူတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ File ...
IMDB: 6.3/10 65,754 votes